Jiraata Minneopolis Goerge Floyd erga poolisoni ajjeeste booda magaala Des Moines hiriiri nagaya | KWIT
Adrews akka jetteti ammati waan bakka keenu ammaaf nijira. Governor akka jetteti isiin garee xiyyafanno itti godhatama keesa jirti. Adrews ilaalcha biraa argachuf yeroon amma jedhe.
Reynolds akka namni 9:00.p.m. booda hin bane ni degarti. Hiriira nagahaa toohachuf police Des Moines department poly county sheriff office fi Iowa State patrol waliin hojachu jiruu.
Namichi Congress Steve King sababa covid-19 rakko dhufu hir’isuuf miidha dirqama kan uumu gargaarsa federaalatin kan keennu fi guyyaa har’a hime.
Kafaltin hisaaba kan doolaara billiyoona 16 meeshaadhani seeraa akka bahuu King gabaase. Akka inni jedhetti biili indemnity kan qootee bultoota booye isaani qurquruu jedhan akka kefaluuf himan.
Ummani jiraatota Iowa kumaa oliin jiraan kaardi absentee ballot kaa filaannoof qophayee har’a kaara postattin erguu qaban yoking borii qamaan dhaqanii falachuu qabu. Har’ii guyaa dhumatti warii postaan erguu, garuu qamaan filachuuf amoo boori dhaquu qabu.
Sababa dhukubatif, secretariin Iowa Paul Pate namoota filanno godhan hundaaf kaardi filannoo ergeef jiraa jedhe. Kanaafu democraati fi republican felannoo isaani kan jalqabe galmeesssu jiran. Akka Pate jedhetti namni 486, 000 kan taran filanno borittif ergame, garuu harki 69% Jum’aa office county auditorif galee jira.
Sarveen haarawni akka mullisuti hogaannaan bisneesaa akka jedhetti ikonomiin irratti jijiramma ni mul’ate keessatu aanawan kutaa 9 kan karaa MidWest, osoo babal’ini dhukuba coronavirus itti jiru. Waliigalati aanadhani kanaaf ikoonomin foyya’aa jira May 43.5 irraa kan Aprils 35.1 fooya’ee jira. Uffitti amanamuna sarveen Wiyxata gadhi dhiifame, kunis uffitti abdii godhachuufi ikoonomini biyyaale assira jalqabe ji’a 6 booda seerati deebi’u abdii qabani.